Mon, Jan 20, 2020 at 3:49pm
अघिल्लो दुई दिनमा ३४ अंक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक मंगलबार २६.९१ अंक बढेर ११५० दशमलव ७४ अंकमा पुग्यो। यसरी सेयर बजारमा ‘बाउन्स ब्याक’ देखिनुको कारण अरु केही नभएर अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको भाषण हो। मन्त्री खतिवडाले सेयर बजार घटेको बेला लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने उचित समय भएको बताएका थिए। मंगलबार बिहान कर्मचारी सञ्चय कोषको वार्षिकोत्सवमा मन्त्री खतिवडाले लगानी गर्ने बेला आएको बताएपछि बजार सूचकांक २.३९ प्रतिशत बढेको हो।
सेयर बजारमा जिम्मेवार पदाधिकारीको भनाइका आधारमा लगानीको निर्णय गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी नै छ। तर, विकसित बजारमा यति ठूलो उतारचढाब चाहिँ आउँदैन। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लघुवित्त कम्पनीको पुँजी बढाउने भाषण गरेका आधारमा लघुवित्तको मूल्यमा आकासिएको थियो।
सेयर कारोबारको विद्युतीय राफसाफ गर्ने प्रणाली (सीडीएससी) कार्यान्वयनमा आएपछि बजार सूचकांक चार गुणासम्म बढ्नसक्छ भन्ने हल्ला चलाएर पनि टाठाबाठा लगानीकर्ताले बजार बढाएका थिए। त्यसो त नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा प्रयोग भएको कालोधन छानबिन गर्ने भनेपछि बजार ओरालो लागेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई जुवाघर भनेको र हालका अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले अनुत्पादक क्षेत्र भनेका कारण बजार ओरालो लागेको लगानीकर्ताले आरोप लगाउँदै आएका छन्। नीतिनिर्माण तहमा भएका व्यक्तिको भनाइले नेपाली सेयर बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाब आउने यी केही उदाहरण हुन्।
अहिले पनि बजार बढ्नुपर्ने कुनै कारण नहुँदासमेत अर्थमन्त्रीको भनाइकै आधारमा बजार उचालिएको सेयर ब्रोकर नै बताउँछन्। ‘कि पूर्वाधारमा विकास हुनुपर्‍यो, कि नीतिगत सुधार हुनुपर्‍यो, कि लगानीकर्ताको मनोबल चुलिने प्रस्ट कारण हुनुपर्‍यो अथवा बैंकको ब्याजदर घट्ने र लगानी गर्ने पैसाको फालाफाल हुनुपर्‍यो’, एक ब्रोकर भन्छन्, ‘तर अहिले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले अर्थमन्त्रीले सकारात्मक भाषण गरेकै भरमा बजार बढेको छ। यस्तो वृद्धि टिकाउयुक्त हुन्छ भन्ने छैन।’
अहिलेको अवस्थामा सेयर बजार उकालो लाग्ने आधार निकै कमजोर रहेको लगानीकर्ता पनि बताउँछन्। सेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक प्रकाश तिवारी वित्तीय प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य पैसा अभाव र बढ्दो आयातले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रमा ठूलो आकारमा लगानी बढिहाल्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
विश्लेषकका अनुसार सूचीकृत कम्पनीको प्रतिफल क्षमताले पनि बजार चाडै उक्सिनुपर्ने कारण देखिन्न। ‘जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिफलले अहिलेकै मूल्यलाई पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन’, एक ब्रोकर भन्छन्। उनको बुझाइमा जलविद्युत्को सेयर डिबेन्चरभन्दा पनि कमजोर साधन हो। जलविद्युत्को उत्पादन क्षमता र मूल्य दुवै पूर्वनिर्धारित हुने भएकाले आम्दानीमा फेरबदल आउँदैन। इजाजतको अवधि पनि निश्चित छ। ‘अर्थतन्त्र बढेर उत्पादन बढ्ने पनि होइन, अर्थतन्त्र कमजोर भएर जलविद्युत्को आय घट्ने पनि होइन,’ ती ब्रोकर भन्छन्, ‘व्यवसायिक विस्तारको सम्भावना नै नभएको जलविद्युत्को सेयरमा समेत ठूलो उतारचढाव देखिन्छ। यो स्वाभाविक होइन।’
अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको मूल्य पनि स्वाभाविक हालतमा नरहेको जानकार बताउँछन्। बढ्दो प्रतिस्पर्धा र नियामकीय कडाइले निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफा खुम्चिने अवस्था रहेको बीमाका जानकार बताउँछन्। लघुवित्त कम्पनीहरुको पनि अझै अधिमूल्यन भएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीले लघुवित्त सेवा दिँदै आएका गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण गरिसकेपछि मर्जर र एक्विजिसन अघि बढाउने बताएका छन्। त्यस्तो बेला थोरै पुँजी लिएर व्यवसाय गरिरहेका नयाँ संस्थाहो अस्तित्व धरासायी हुने जोखिम भएको भन्दै ब्रोकरले यस्तो बताएका हुन्।
लामो समय बजार घटेपछि मंगलवार सामान्य सुधार (करेक्सन) देखिएको लगानीकर्ताले बताएका छन्। चार महिनाअघि १३२१ अंकसम्म पुगेको सेयर बजार परिसूचक त्यसयता लगातार घटेर सामेवार ११२३ अंकमा झरेको थियो। पछिल्लो एक वर्षको नेप्सेको प्रवृत्ति नियाल्दा ठ्याक्कै यस्तै अवस्था यसअघि पनि देखिएको थियो।
ठीक एक वर्षअघि १२८० अंकमा पुगेको बजार सूचकांक लगातार घटेर १११८ अंकमा झरेको थियो। त्यसपछि करिब १ सय अंक बढे पनि पुनः ओरालो लागेर वर्षकै न्युनतम विन्दु ११०० अंकमा झरेको थियो। मंगलबारको व्यापारमा पनि ११५२ अंकमा प्रतिरोध पाएर नेप्से केही घटेको छ। यसले निरन्तरको वृद्धिको संकेत गर्दैन। अन्नपूर्ण पोस्टबाट